Tondra-drano hosodoko maimaim-poana ho an'ny volavolanao | Famoronana an-tserasera
Tondra-drano maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny volavolanao
Arnau Aparisi | | dia midika hoe, Textures
Andro vitsy lasa izay dia nitondra torolàlana momba ny fomba fanaovana ianao endritsoratra vokatry ny watercolor, anio izahay dia mitondra safidy mifono tondra-drano ho anao maimaim-poana azonao ampiharina amin'ity fampianarana ity. Ny sary izay entinay aminao amin'ity tranga ity dia maimaimpoana tanteraka ary avo lenta izay ahafahanao mampihatra azy ireo amin'ny lesona izay nasehonay anao andro teo aloha fa koa amin'ny volavolanao.
La fifantenana voalohany izany pentina loko enina amin'ny rano Hamela anao hanisy fika vitsivitsy amin'ny teboka miloko amin'ny volavolanao. Miditra ireo sary ireo .PNG tsy misy background izay ahafahantsika manampy azy ireo amin'ny volavolantsika amin'ny fomba organika kokoa. Amin'ity tranga ity dia tsy manana firafitra taratasy izy ireo, ahafahantsika manampy azy ireo amin'ny faritra rehetra, manomboka amin'ny sary izay tianay homena karazana loko vitsivitsy, hatrany amin'ireo fonosana izay tiana homena tendro mafana sy maoderina kokoa. Ny safidinay dia misy pentina loko mandoko telo mafana kokoa (volomboasary, mena, magenta, mavo, ocher ary volontany) ary teboka miloko mangatsiaka telo (manga, maitso, volomparasy, volomparasy).
La safidy faharoa dia an'ny hafa pentina loko enina amin'ny rano Hitanay koa izy ireo maimaim-poana amin'ny endrika lehibe, mamela antsika hanitatra na hisafidy ampahany iray amin'ilay toerana fotsiny izy io. Na mampiditra firafitra amin'ny volavolantsika na hampiasa azy amin'ny endrika lehibe kokoa. Ity fifantenana ity dia amin'ny endrika ihany koa .PNG Tsy misy fiaviany izay mamonjy antsika amin'ny fotoana fanadiovana ny tasy, amin'ity tranga ity dia tsy manana firafitra taratasy koa izy ireo.
Tsy toy ny fifantenana voalohany ireo toerana ireo a drafitra tsy ara-dalàna kokoa, Noho izany dia mety izy ireo ny mampihatra endrika. Ny fifantenana dia misy teboka enina, amin'ity tranga ity ny fifantenana ny loko dia midadasika kokoa sy mavitrika kokoa.
Amin'ireo tranga roa ireo ny tolo-kevitro manokana dia ny hanovanao ny loko sy ny fomba fampiharana azy ireo, mba hahitanao ny fahaizan'ireo sy ny habetsaky ny safidy arosony aminay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Tondra-drano maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny volavolanao